कुन कारागारमा कति छन् कोरोना संक्रमित ? « Deshko News
कुन कारागारमा कति छन् कोरोना संक्रमित ?
काठमाडौं । देशभरका कारागारमा कोरोना संक्रमण त्रास बढेको छ। ठाउँ अभावले दूरी कायम गर्न नसक्दा संक्रमण जोखिम थपिएको हो। सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागारमा आइतबार थप ३५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ४८ पुगेको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रवक्ता देवर्सी सापकोटाले बताए।
विभागले शंका लागेका देशभरका ८ सय ७९ जना ९कैदीबन्दी, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी०को पीसीआर परीक्षण गरेको थियो। ५ सय ९४ कैदीबन्दी, २ सय ७ जना सुरक्षाकर्मी र ७८ जना कर्मचारीको स्वाब परीक्षण गरिएको हो।
परीक्षणपछि १ सय ६६ जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसमध्ये ७२ जना उपचारपछि संक्रमणमुक्त भइसकेका र अन्यको उपचार भइरहेको सापकोटाले बताए। उनका अनुसार पर्सा कारागारमा ३३ जनामा कोरोना देखिएको छ। त्यहाँका ४ जनाको मात्रै उपचार भइरहेको छ। बाँके कारागारमा ८ जनामा संक्रमण देखिएकामा उनीहरु उपचारपछि निको भइसकेका छन्। विभागका अनुसार सिरहा कारागारका ७ कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएकोमा सबै जना निको भइसकेका छन्।
सुनसरीस्थित झुम्का कारागारका ८ कैदीबन्दीमा संक्रमण देखिएको छ। तीमध्ये ४ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका सापकोटाले बताए। स्याङ्जा कारागारमा १ र सिन्धुपाल्चोकमा २ जनामा संक्रमण देखिएकोमा उनीहरु पनि कोरोनामुक्त भइसकेका छन्। सापकोटाका अनुसार विभिन्न कारागारका कर्मचारी, कैदीबन्दी र सुरक्षाकर्मीसहित ६४ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी छ। देशभरका ७४ कारागारमा २४ हजार १ सय ६३ जना कैदीबन्दी छन्। यो संख्या क्षमताभन्दा बढी हो।
सावधानी अपनाउँदा(अपनाउँदै कारागारमा संक्रमण देखिएको विभागका महानिर्देशक द्रोण पोख्रेलले बताए। संक्रमण जोखिम बढेसँगै पछिल्लो समय कैदीबन्दीको भेटघाटमा रोक लगाइएको छ। कैदीबन्दीलाई अस्पताल र बाहिर पठाउँदा पीपीई, माक्स र पन्जा लगाएर लाने गरिएको पोख्रेलले बताए। ‘सबैतिर संक्रमण फैलिएका बेला कारागार कसरी अछुतो रहला र रु हामीले सक्दो सावधानी अपनाउँदा(अपनाउँद संक्रमण देखियो’, उनले भने, ‘संक्रमण देखिएका कारागारका कैदीबन्दीको उपचार भइरहेको र अधिकांश उपचारपछि संक्रमणमुक्त भइसकेका छन्।’ अन्नपुर्ण पाेष्टबाट
कुन कारागारमा कति ?
पर्सा ३३ जना (४ जना उपचाररत )
केन्द्रीय कारागार ४८ जना
सुनसरी (झुम्का) ८ जना (४ जना उपचाररत )
बाँके ८ जना (उपचारपछि संक्रमण मुक्त)
सिरहा ७ जना (तीन जना उपचाररत)
स्याङ्जा १ (संक्रमण मुक्त)
सिन्धुपाल्चोक २ जना (उपचारपछि संक्रमण मुक्त)